Semalt Expert: Ungaparadzira sei Paypal Scam
Julia Vashneva, Mutungamiriri Mukuru weVatengi Vekutsvaga Semalt Dhidhiro Dhidhijita, anotsanangura nezvezvinetso uye anogovera maitiro ake pane nyaya.
Ichangobva kusarudza kutengesa chikepe changu chiduku sezvo ndisina nguva shoma yekuishandisa pasinei nerudo rwangu rwegungwa. Ichi chikepe chakakwezva chikamu chikuru kubva kune imwe nhamo isina kunaka ndakawana kunyunyuta kwokutanga. Chokutanga, chikepe changu chaiva chekambani yemunharaunda chaiyo yakanyatsokonzerwa pamusika weFinland. Ndangozviona zvisingazikamwi kutengesa kune imwe mukadzi muMexico apo ingadai isina kushamisika kunze. Kunze kweizvozvo, ndakaramba ndichinetseka kuti nei mukadzi uyu aida iyi yemuenzaniso, iyo yaingowanikwa muAtlantic chete - comment faire fiche de paie. Mari yaizomubhadhara zvakadini kuti aende nayo kuMexico? Ndakabva ndafunga kuti chikepe changu chakanga chisingatengeswi kunyange kufunga nezvekufamba kwemakiromita kumhiri kweAtlantic. Kunyange zvakadaro, kutenga uye kutumira chikepe kubva kuEurope zvakanga zvisingakwanisi kunyanya kufunga nezvezvikepe zviduku zvinodhura uye zvakanyanya kuNorth America.
Zvinoshamisa kuti mutengi akadaro haana kuratidza kufarira muchikepe. Akanga achida kuutenga asina kutarisa muviri wake pakutanga haafaniri kufunga nezvekuti mubvunzo umwe chete wekutengo wakaitwa usina kunyanya kudiwa kwemashoko. Ini ndakazoona kuti scammer yakanga isingazoiti mibvunzo yakawanda pamutengo iyo isina kumbobvira ichida kubhadhara chero zvakadaro. Muzvokwadi, mamwe mubvunzo aitungamirirwa pamitemo yekubhadhara panzvimbo pechikepe pachako kana kuti chayo..Kazhinji, mutengesi anofanira kunge ari iye anotsvaga nzira yekubhadhara apo mutengi achitsvaka kuvimbiswa kweuchapupu hwehudziri.
Pakuongorora kubva kwekutaurirana kwedu, ndakaona kushandiswa kwekutaura mutauro wekutengesa kutanga chikamu. Mutauro wacho unogona kushandiswa chero ipi zvayo yezvinhu zvinotengesa kunze uko usina kutora chikepe, uye chakanga chisingatauriki uye chinowanzoita. Kuwedzera pasi pasi hurukuro dzedu, zvakava pachena kuti Paypal ndiyo chete inobatsira uye inogamuchirika nzira yekubhadhara. Ndaifunga kuti zvaireva kuti zvive zvakanakisisa zvekutsvaga kwavo. Ndakatorawo kushamisika kuva nekubhadhara kune kambani yekutumira iyo kero yake isina kufanana nekambani inogamuchira. Panguva yekukurukurirana kwedu, mutengi akarega kuchengeta zvikumbiro zvangu nemibvunzo pandinenge ndichipindura chete kana chirongwa chacho chikaguma. Kuziva kuti Paypal inoshanda sei, ndakakurumidza kuona kuti chibvumirano chacho chakanga chakaipa.
Pakuongorora zvakanyanya kune mutengi, ndakaona pasipoti yake yeBrithani kunyange zvazvo achishandisa kero yeMexico uye nhamba yefoni. Iniwo ndakatungamira purogiramu yake yemifananidzo iyo yandakaona ndeyomumwe mukadzi muUnited States. Zvinoshamisa, mifananidzo iripo pane dzimwe nzvimbo dzekufambidzana apo mukadzi uyu akaroorana maererano neshoko rake. Izvi zvinondisvitsa kumarongerwo emitauro, mudzimai weEurope ane pipisipiti yeBritain neAmerica adhire anoita zvikanganiso zvakawanda zvegiramu mune zvatiri kutaura? Panguva ino ndaive ndichiongorora zvakakwana, uye pasipoti yake yakakundikana kushaiwa kwandinoedza. Zvose zvakanga zviri mairi zvakanga zvakanyorwa mazita, mifananidzo, metadata uye kunyange chiratidzo.
Pakauya kusayina zvibvumirano, akaita kuti kugadzirisa kuve nechinasa chakasiyana kubva pane zvakapiwa mupasipoti yake. Tichifunga nezvekuti takagara munguva dzakasiyana-siyana, zvakaita sezvisinganzwisisiki mukadzi uyu akatengesa kune emaimeri angu ose anenge pakarepo. Ndainzwa chimwe chinhu chinonzi fishy, ​​iyo hurukuro yakashandura kuenda kuhutano uye pakupedzisira yakatungamirira kurufu ruduku. Nenzira iyo ndakadzivisa chirwere chinouraya.